I IGLTA dia mifidy seza Kolombiana voalohany ho an'ny filankevi-pitantanana
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » I IGLTA dia mifidy seza Kolombiana voalohany ho an'ny filankevi-pitantanana
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Zon'olombelona • LGBTQ • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News
Felipe Cárdenas, mpiara-manorina & Tale jeneralin'ny Chambre du Commerce LGBT Kolombiana (CCLGBTCO) no Kolombiana voalohany nitana ny laharan'ny birao ambony ho an'ny International LGBTQ + Travel Association.
Felipe Cárdenas, mpiara-manorina & CEO an'ny Antenimieran'ny varotra LGBT Kolombiana (CCLGBTCO), no notendrena ho filohan'ny IGLTA.
Ny fifidianana dia hita taratra amin'ny ezaky ny IGLTA hampiditra mpikambana tanora kokoa ao amin'ny fikambanana fizahan-tany manerantany 38 taona.
Felipe Cárdenas dia niditra ho mpikambana tao amin'ny birao IGLTA tamin'ny volana martsa 2017 ary mpitahiry vola.
Ny biraom-pitantanana International LGBTQ + Travel Association dia nifidy ny tompon'andraikitra vaovao ho an'ny 2021-2022. Felipe Cárdenas, mpiara-manorina & CEO an'ny Antenimieran'ny varotra LGBT Kolombiana (CCLGBTCO), no notendrena ho filoham-pirenena, nahatonga azy ho Kolombiana voalohany nitana ny toerana ambony amin'ny IGLTA. Izy koa no taonarivo voalohany nitarika ny birao fikambanana, taratry ny ezaky ny IGLTA hampiditra mpikambana tanora kokoa ao amin'ny fikambanan'ny fizahan-tany manerantany 38 taona.
“Ny maha talen'ny talen'ny talen'ny IGLTA ahy, amin'ny maha-fikambanana mitarika ny fampandrosoana LGBTQ +, dia voninahitra lehibe ho ahy. Mahatoky aho fa hiroso amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana misimisy kokoa sy feno, ”hoy i Cárdenas, izay niditra ho mpikambana tamin'ny birao tamin'ny volana martsa 2017 ary mpitahiry vola teo aloha.
"Amin'ny maha Latino, ary ny Kolombiana voalohany sy ny arivo taona voalohany naha-Lehiben'ny seza, ireo rehetra ireo IGLTA azon'ny fianakaviana antoka fa manana ny fanolorantenako tanteraka aho amin'ny fidirana amin'i John Tanzella, filoham-pirenenanay, ary ny ekipa IGLTA & IGLTA Foundation Teams mba hamolavola ny fikambananay manerantany amin'ny fampisehoana izay ilain'ny mpandeha maro samihafa mba hivezivezena am-pilaminana ary hiverina hatrany amin'ireo toeran-tsoa rehetra. sy ny fizahantany fizahan-tany izay iarahantsika miasa. ”
Cárdenas dia hanatevin-daharana ny ekipa mpitarika ny birao mpanatanteraka amin'ny alàlan'ny filoha lefitra Shiho Ikeuchi, Tale jeneralin'ny Hotel Sorano any Tokyo, Japon; Ny sekretera Richard Krieger, talen'ny Sky Vacations; ary ny Mpitahiry vola Patrick Pickens, mpitantana ny MICE ao amin'ny Delta Air Lines. Jon Muñoz, Lehiben'ny DEI Officer ao Booz Allen Hamilton, dia hanana ny toeran'ny Seza teo aloha.
The Fikambanan'ny Travel LGBTQ + Iraisam-pirenena no mpitondra manerantany amin'ny fampiroboroboana ny dia LGBTQ + ary mpikambana afiliana mirehareha ao amin'ny United Nations World Tourism Organization. IGLTANy tanjon'izy ireo dia ny hanome vaovao sy loharanom-pahalalana ho an'ireo mpandeha LGBTQ + ary hanitatra ny fizahan-tany LGBTQ + manerantany amin'ny alàlan'ny fanehoana ny fiantraikany lehibe eo amin'ny lafiny sosialy sy toekarena. Ny mpikambana ao amin'ny IGLTA dia misy ny LGBTQ + sy ny LGBTQ + fandraisana trano fandraisam-bahiny, toeran-kaleha, mpamatsy serivisy, mpiasan-dàlana, mpandraharaha fizahan-tany, hetsika ary haino aman-jery fitsangantsanganana any amin'ny firenena 80. Ny Foundation philanthropic IGLTA dia manome hery ny LGBTQ + mandray ireo orinasa mpanao dia lavitra manerantany amin'ny alàlan'ny fitarihana, fikarohana ary fanabeazana.